Global Voices teny Malagasy » Torohevitra isankerinandro mikasika ny Fanoratana: Mifandray amin’ny Mpamaky · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Jona 2019 15:00 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika imanoela fifaliana
Manangona ireo fanao tsara indrindra amin'ny fanoratana sy fanaovana tatitra ato amin'ny Global Voices ny Torohevitra Isankerinandro Momba ny Fanoratana. Omen'i Janine Mendes-Franco , mpanonta vaovaon'ny faritra Karaiba , ho anao ireo torohevitra ho an'ny volana Aogositra.
Famoahana faha #3 momba ny Torohevitra Isankerinandro Momba ny Fanoratana, volana Aogisitra, ity. Amin'ny fiainako tsy maha-GV ahy, manoratra amin'ny fomba feno famoronana ary miasa amin'ny zava-drehetra aho, avy any amin'ny lahatsoratra ho an'ny dokambarotra sy sarimihetsika fanadihadiana mankany amin'ny andianà horonantsary ho an'ny ankizy ao amin'ny fahitalavitra , sady mandalo amin'ny boky ho an'ny ankizy izay mbola tsy nivoaka ihany koa. Mba ho tomombana tsara ny fanoratako, tsy maintsy mifandray amin'ny mpamakiny izy – ary hitako fa ireo lahatsoratra GV miresaka amin'ny olona no manako indrindra. Hifantoka amin'ireo fomba mety hanampy antsika hifandray amin'ny mpamaky antsika manerana izao tontolo izao aho androany.
Taminà lanonan-takariva iray, efa tafahitsoka niresaka tamin'ny olona iray izay mivezivezy fotsiny tsy nanao izay hahatakarana ny fomba fijeriny ve ianao? Aza mba izany olona izany. Voarafitra tsara ireo lahatsoratra izay miresaka amin'ny fomba mahomby. Matetika fanamby lehibe ny mamorona rafitra feo (matanjaka azo antoka), satria miezaka ny hamorona famoahana amin'ny alalana vaovao am-polony maro voarindra isika. Tena mitovy amin'ny famokarana horonantsary fanadihadiana izany raha ny marina – mamaritra ny tantara ho tantarainao ireo ampaham-peo ampiasainao (amin'ity tranga ity, loharano toy ny blaogy, Facebook, Twitter, sns.) Saingy eo anelanelan'ireo ampahana “lahatsary” mihetsiketsika ireo, mila mamorona rafitra ianao. Ny andalana voalohany, ohatra, dia tokony hamintina ny zava-misy – ny zava-mitranga ary ireo antony tokony hiraharahian'ilay olona iresahanao izany toe-javatra izany. Arakaraky ny handehanan'ilay tantara, tokony handamina ireo fampahalalambaovao amin'ny fomba lojika ny rafitra noforoninao. Afaka mampiasa ireo ampaham-peo avy amin'ireo haino aman-jerin'olontsotra mba hanolorana hevitra mifandraika na votoaty vaovao ianao. Tokony hamerina ilay fanontaniana, hametraka fanontaniana, na hamoaka famintinana mihitsy aza ny fiafaran'ilay lahatsoratra. Jereo ity lahatsoratra  nosoratan'i Probir Bidhan ho toy ny ohatra.
Indraindray mora kokoa ny mamaky lahatsoratra rehefa notsinjaraina izany. Tena ilaina io ho an'ireo lahatsoratra lava be izany na ireo lahatsoratra izay manampy ny fanazavana bebe kokoa ny votoaty ny fanasokajiana  ireo singa ao anatin'ny tantara.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/26/140439/
 andianà horonantsary ho an'ny ankizy ao amin'ny fahitalavitra: https://instagram.com/p/57-5A4ATGX/
 ity lahatsoratra: https://globalvoicesonline.org/2015/08/15/why-is-gang-rape-and-child-rape-skyrocketing-in-bangladesh/